Ubumbele obuhle ekhaya
Amabele amabini yiyona nto ibaluleke kakhulu nawuphi na umfazi, umqondiso wesini. Kodwa ngokuphindaphindiweyo ekuphandeleni ubuhle, sikhohlwa ukuba isifuba sifanele sibe sempilo. Yintoni esinokuyenza ukuze singagcini nje ukukhangwa kwangaphandle, kodwa kunye nempilo yonke yamabele? Yintoni kwaye yintoni ibele elifanelekileyo ekhaya? Wonke umfazi kufuneka azi le nto.
1. Khetha ibra efanelekileyo
Inxalenye ebalulekileyo yokunakekelwa kwebele ngokufanelekileyo kukuba ukhetho lwebrasi. Apha, kwakhona, kubafazi abaninzi, umlinganiselo oyintloko wokhetho lubuhle kunye nokufaneleka komzekelo. Oku akusoloko kuchanekile. Into ephambili kukuba ibhondi kufuneka ixhase ibele, kwaye ungayifaki. Ngamanye amaxesha umfazi uzama ukulungelelanisa indlela yokuqhaqhayisa ngoncedo lweelinen, kodwa ngaba kulungile. Ngokomzekelo, unzima kakhulu emabele akhe ukuqinisa intsimbi ebini ubuncinci ukubonakala "ukungahambi" kwakhe. Ngexesha elifanayo, akanakhathazeka, ngamanye amaxesha uyabuhlungu. La maxhoba awanamsebenzi kuphela, kodwa ayenobungozi kwimpilo yesifuba. Ngoko ukuhamba kwegazi kuphazamiseka kakhulu, kukho iindlela eziqhubekayo, eziza kuguqulwa zibe ngumhlaza. Ngoko uhlamba kufuneka lube sisayizi obukhulu - akukho ndawo yokunyanzelisa, kodwa kwakhona ukuba ungagcini, ubenze iifolda. Emva koko ibele elifanelekileyo liya kunikwa lona. Kodwa kunjalo: kungakhathaliseki ukuba ukhululekile kangakanani ibhokhwe - mawaphule amabele kuyo, kwaye, kungekuphela nje ebusuku. Ukuba unempelasonto yamahhala okanye ubuncinane iiyure ezimbalwa emva komsebenzi - thintela iingubo zakho kwaye ube "njengokukhanya".
2. Yenza uphenyo
Ukuzihlolisisa izilwanyana ezincinci kufuneka kwenziwe kwindlu rhoqo. Ukuba ufuna ukuphepha iingxaki kwibele, jonga ngaphezu kokunyamekela. Le nto ibalulekileyo ekuboneni ngokukhawuleza komhlaza wesifuba kwinqanaba lokuqala, xa usenokupheliswa ngokupheleleyo. Njalo yenza oku kwinqanaba elifanayo lomjikelezo, ngokukhethekileyo iintsuku ezi-2 ukuya kwezi-3 emva kokuya esikhathini. Ukuba sele usuqalile ukuphuma kwesikhashana, hlola isifuba rhoqo ngosuku olufanayo lwenyanga. Emva kokuba uqaphele nayiphi iinguqu ezitshutshisayo, unganqikazi ukuya kudokotela. Uninzi lweenguqu ezitholakala ebusweni ngabasetyhini ngokwabo zizobunjwa. Kodwa ke, njalo xa u tyelela umfokazi, mcele ukuba abuke amabele akho. Kwi-20-35 iminyaka, kufuneka uhlolwe rhoqo kwiminyaka emibili (ukwenza i-breast ultrasound), kwaye ubuncinane kanye ngonyaka ukwenzela ukuba wenze imilm.
3. Ukwenza i-gymnastics
Into ebaluleke kakhulu ekunakekelweni kokunyamekela imfuyo yimfundo yempilo. Imisipha ye-pectoral, exhasa isifuba, kufuneka igcinwe ngezwi eliqhubekayo. Kukho iindlela ezininzi zokukhusela amabele akho ekuxhonyeni nasekulahlekeni. Ngokukodwa usongela abasetyhini abagqibe ekubeni banciphise isantya. Amanqatha amaninzi enqatha, kwaye izihlunu azifundanga. Ngako ke ukutshatyalaliswa kwebele, kunye nokulahleka kwekhangelo layo, kunye nengcamango yokuhlinzwa ngoplastiki. Isisu se-thoracic sinokuphefumuliswa ngokuzivocavoca okufanelekileyo. Ukubhukuda okanye ukudansa kunokukunceda ukufumana ibele epheleleyo. Ukuzivocavoca umzimba kufuneka kwenziwe kwibrasi ukwenzela ukuba ulusu aluhlali. Kwaye enye into: ukuhamba rhoqo koqeqesho kubaluleke kakhulu. Ukuba uqale uqala ukuzisebenzisa, uze uphonsa-umphumo uya kuba ulwahlukileyo. Iziphumo ezintle kakhulu zokuqiniswa nokunyuka kokuguquguquka kufumaneka ngokusetyenziswa rhoqo. Nantsi isicwangciso esicetywayo sokuzivocavoca esingadingi izixhobo ezikhethekileyo kunye noqeqesho. Ngokuncedwa kwakhe, kunokwenzeka ukufumana isifuba esihle ekhaya. Ngoko, kufuneka uhlale esihlalweni (isepha, isihlalo), ulungele umqolo, uphinde udibanise izandla zakho phambi kwakho ngezandla zakho kunye. Ukuze ugxininise ngakumbi kwisifuba, qiniseka ukuba izibonda zikwahlukana kakhulu. Ubuninzi buxinzezele iintende zakho ngeemitha ezi-5. Phinda lo msebenzi 4 amaxesha. Ukuqeqeshwa kwansuku zonke ngale ndlela imizuzu embalwa ngosuku kunokusebenza emangalisayo. Ukuze amabele abe ne-elastic and taut, ukubhukuda kunye nezinye iimidlalo nazo ziyacetyiswa.
4. Ukuhlamba, ukwenza i-massage
Amabele angatshintshwa ngezinye iindlela. Ngokomzekelo, yenza okungaphezulu. Apha, isitya esihlukileyo siya kuhlangulwa. Ukutshintshwa kwamanzi abandayo kunye namanzi ashushu kushukumisa ama-receptors esifubeni, kwenza kube lula ngakumbi kunye nokwandisa umthamo. Ngesicelo esiqhelekileyo, isiphumo sinokumiswa, kwaye amabele akho aya kwanda. Kuphela kubalulekile ukuba ungayidluli ngamanzi abandayo - amabele angashenwa. Kodwa ngokubanzi, le nkqubo iphucula ukujikeleza kwegazi kwaye iyacetyiswa kusasa. Ibhedi yithuba elifanelekileyo lokuxilisa. Unokwenza oku ngezandla zakho okanye isiponji. Ngaba ukunyuka kwesantya kwindlela yesibhozo ukusuka kumahlombe ukuya kwiinkipi. Kufuneka uhambe kakuhle, kodwa usomelele ngokwaneleyo ukufudumala igazi. Ikhosi eqhelekileyo yokubilisa i-massage kufuneka idlule ubuncinane imizuzu eyi-10. Zama ukwenza ngokucwangcisiweyo ixesha elithile. Qala ikhalenda apho ubeka khona zonke iikholeji zokusasaza kwinyanga ukuya kwinyanga. Ngoko ukuphumelela kwabo kuya kwanda ngamanye amaxesha.
5. Faka izicelo zokunyamekela
Ukukhethwa ngokuchanekileyo ngohlobo lwezilwanyana zezimpawu zelinen kwenza ibele ihambe kakuhle, ithenda, imnandi kumgca. Ukongezelela, izimonyo zesifuba zivuselela i-microcirculation yegazi, ephucula impilo yakhe yonke. Isifuba esincinci sinokukhishwa nje nge-lotion okanye ioli. Ngokusetyenziswa rhoqo, kuphucula isikhumba sethemba sesifuba. Emva kwexesha xa ulusu lwesifuba lulahlekelwa ukunyaniseka kwalo, kuyimfuneko ukutshintshela kwenye "inzulu" ithetha. Kukho iziqholo ezikhethekileyo zokunakekelwa kwesikhumba sebele xa udala. Kufuneka isetyenziswe-oku kuya kwandisa ukwanda kwesikhumba. Khumbula ukuba i-hydration yebele iyahamba kunye ne-decolleté ukunyusa. Unokuphinda ukhankase kwiinkonzo ze-salon. Akuyonto ephantsi, kodwa isebenzayo kunye nexesha elide. Kwaye umphumo uya kukukholisa, mhlawumbi kungekhona nje wena.
6. Yidla ngokufanelekileyo
Ngokutya okunokulinganisela, unokulibazisa ukuguga kwesikhumba nokunciphisa ingozi yomhlaza wesibeleko kaninzi. Imenyu kufuneka ibe yintlanzi eyahlukileyo, isityebi kwi-omega-3 fatty acids. Zikhusela umzimba wakho kumdlavuza kunye nezifo zentliziyo. Iziphumo ezinobungozi emzimbeni onayo kunye neeritrus. Ziqulethe i-limonene-icandelo elithintela ukuphuhliswa kweesisu. Isifuba esifanelekileyo siya kuhlala si-elastic and attractive long, ukuba "awunamathanga" kotywala kunye noogwayi. Ukunciphisa ukunyuka kwesisindo kunokuchaphazela kakubi isimo sombele. Ukunciphisa ubunzima ngokuthe ngcembe, ukubeka esweni imeko yazo zonke iziko kunye namabele.
Iindlela zesithethe zokunyuselwa kwebele
Indlela yokwandisa isisindo somzimba wesisu
Ukunyamekela izandla ezomileyo
Ukunyamekela ngokufanelekileyo umzimba wesetyhini
Ndifuna ukuba ngumntwana onobuhle besikhumba
Indlela yokubukeka yandisa imilenze
I-Henna ngeenwele: izakhiwo ezixhamlayo kunye neempendulo zokufumana iimpawu ezifanelekileyo zekhaya
Ukunxiliswa kuyadluliselwa kumntu kumntu
Indlela yokunyamezela indoda ukuba iphole
Iiphambili ezi-3 eziphambili ze-lipsticks zokuzenzela ezendalo
Izifo zabasebenzi baseofisi
Kwiindawo zokuthengisa kwi-intanethi azikwazi ukwenza ukuthenga
Indlela yokuphumelela emva kokuqhawula umtshato kwaye ufumane
Yintoni engenakwenziwa ngexesha lokukhulelwa?
Iziphakamiso zokusetyenziswa kwenombolo yokutya 1